Ungazi kanjani ukuthi inja yami inezinambuzane | Izinja Umhlaba
Ungazi kanjani ukuthi inja yami inezinambuzane
UMonica Sanchez | | Izinja ezijwayelekile
I-Los izinja Zingathinteka ngama-parasites nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, ikakhulukazi uma kungathathwa izinyathelo zokuvimbela, futhi noma kunjalo kwesinye isikhathi zingazibulala ezinye zazo uma uzihambela endle.
Ngakho-ke, ukuvimbela ukuthi uboya bakho bungaphazanyiswa, ake sibone wazi kanjani ukuthi inja yami inezinambuzane.
1 Izinhlobo zama-parasites
1.2.1 Wazi kanjani ukuthi inja yami inezinambuzane zangaphakathi?
Yizona ezilula ukuzikhomba njengoba zibonakala kakhulu. Okuvamile kakhulu amazenze, the imikhaza futhi i izibungu, ezondla egazini lesilwane futhi ezingadala izifo ezahlukahlukene, njengotwayi, isifo seLyme noma i-dermatitis.
Ngazi kanjani ukuthi inja yami inamagciwane angaphandle? Kulula kakhulu: ukubona isinambuzane uqobo noma, kaningi, ukubona ukuthi isilwane siklwebha kakhulu. Kwesinye isikhathi, kusuka ekulimaleni okungaka, ungagcina wenze isilonda esingajwayelekile.
Ukuzivikela kanye / noma ukulwa nazo kubalulekile ukuthi zifakwe kuma-pipettes, amakhola noma izifutho zokuqeda izikelemu entwasahlobo nasehlobo.
Imvamisa sibiza lezi zibungu, ezihlala ezithweni zangaphakathi zenja futhi ezingadala inkinga engaphezu kweyodwa. Kunezinhlobo eziningi, okuvame kakhulu ukuba yizikelemu eziyindilinga nezicaba.
Round: zilala ikakhulukazi emathunjini, kepha futhi zingaba sohlelo lokuphefumula. Zinde futhi ziyindilinga, futhi zidluliselwa ngendle, noma ubisi lwebele uma umama engakhishwa izikelemu.
AmapulaniZibanjelwe emathunjini amancane, i-gallbladder, isibindi, imithambo ye-mesenteric noma ku-hepatic tract. Zivame ukusatshalaliswa ukulunywa ngamazeze, kodwa futhi nendle.
Wazi kanjani ukuthi inja yami inezinambuzane zangaphakathi?
I-Los izimpawu okuvame kakhulu okulandelayo:
Ukuklwebheka kanye / noma ukukhotha ingquza yakhe njalo
Uma inja yakho inesinye noma eziningi zalezi zimpawu, unganqikazi ukumyisa kudokotela wezilwane.
Izimuncagazi kufanele zigcinwe kude nabangane bethu. Kungaleso sikhathi kuphela lapho singaqinisekisa khona ukuthi ngeke bagcine ngokugula okungathi sína.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ungazi kanjani ukuthi inja yami inezinambuzane
Izingoma eziphefumulelwe yizinja (II ingxenye)
Inja yakho ithini ngawe?